Ka esi azụta Bitcoin na CNHC
CNHC (Digital currencies) ndụmọdụ obodo
Q. Kedụ ka m ga-esi zụta Bitcoin na CNHC ?
Kedu ka m ga - esi tinye ndụmọdụ na ndụmọdụ maka CNHC ?
Ahụghị ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa iji zụta Bitcoin na CNHC. Mana ị ka nwere ike iji usoro ọkwụkwụụgwọ ndị ọzọ zụta Bitcoin. Naanị pịa ebe a ka ịlele ụzọ dị iche iche inwere ike iji zụta Bitcoin.